के मोटोपनले यौन जीवनमा असर पुर्‍याउँछ ? – Hamro Nepali Samachar
Home/ स्वास्थ्य/के मोटोपनले यौन जीवनमा असर पुर्‍याउँछ ?
के मोटोपनले यौन जीवनमा असर पुर्‍याउँछ ?
भोक, निद्रा, प्यासजस्तै यौन पनि मानवीय आवश्यकता हो। उमेर, परिस्थिति तथा व्यक्तिअनुसार यौनको चाहना पनि फरक–फरक हुन सक्छ। तर, यौन उत्तेजना नै नहुनु तथा यौन सन्तुष्टि पाउन नसक्नु चाहिँ गम्भीर कुरा हुन्। यसका शारीरिक वा मानसिक अथवा दुवै कारण हुन सक्छन्।
व्यक्ति विशेषको स्वास्थ्य समस्या, यौनप्रति विगतको नकारात्मक अनुभव, चिन्ता, शारीरिक थकान, पार्टनरबीच हुने खटपटले पनि यौनेच्छामा कमी आउन सक्छ।
पुरुषको दाँजोमा महिलामा विवाहपछि तौल बढेको पाइन्छ। विभिन्न अध्ययनअनुसार अधिक तौल अर्थात् मोटोपनले पनि यौन क्रियाकलापमा नकारात्मक प्रभाव पारिरहेको हुन्छ। अधिक तौल भएका व्यक्तिको शरीरमा बोसो थुप्रिने हुनाले यौन चाहनामा कमी आउन सक्छ।
अधिक मोटोपन भएका व्यक्ति न्यूनतम दैनिक क्रियाकलापबाट थाकिसक्छन्। अधिक निद्रा लाग्ने कारणले पनि उनीहरू यौन कार्यमा अल्छी हुन थाल्छन्। महिला र पुरुषबीच यौन आकर्षण बढाउने विभिन्न तŒवमध्ये छरितो जीउडाल पनि एक हो। अधिक मोटोपनले पार्टनरप्रति यौन आकर्षण घटाउन सक्छ।
यस कारण त्यस्ता व्यक्तिले आपूm सुन्दर नदेखिने हीनताबोध गर्न सक्छन्। यसले गर्दा आत्मविश्वासमा कमी आउनुका साथै साथीसंगीमाझ घुलमिल गर्न पनि हिच्किचाउन सक्छन्। मोटोपन भएका महिलामा महिनावारी गडबड हुन सक्छ। जसले गर्दा यौन सम्पर्क राख्न नै हिच्किचाउने हुन्छन्। मोटोपनकै कारण निःसन्तान भई आत्मग्लानि महसुस गरी यौन कार्य कम गर्न सक्छन्।
मोटोपन भएका व्यक्तिले प्रेमालाप गर्न तथा सम्बन्ध बढाउन पनि गाह्रो मान्न सक्छन्। यौन क्रियाकलापका क्रममा अधिक वजनले गर्दा विभिन्न आसन उपयोग गर्न गाह्रो हुन्छ। त्यसैले सफल यौन क्रियाका लागि आवश्यक पर्ने विविधतामा कमी आउन सक्छ। चाँडै थाक्ने, सास फुल्ने तथा अत्यधिक पसिना आउने कारणले कालान्तरमा शारीरिक तथा मानसिक दुवै कारणले यौन क्रियाबाट टाढा रहन चाहन्छन्, मोटा मानिस।
तौल धेरै भएका व्यक्ति मधुमेह, उच्च रक्तचाप, उच्च कोलेस्टेरोलजस्ता रोगबाट ग्रसित हुन्छन्। कतिपय औषधिले यौन जीवन, यौन उत्तेजनामा नकारात्मक असर पु¥याउँछन्।
मोटोपनले यौन जीवनमा असर गर्न थालेको आभास भयो भने त्यसलाई घटाउनतिर लाग्नुपर्छ। जीउडाल छरितो बनाउनुपर्छ। त्यसका लागि नियमित व्यायाम गर्नुपर्छ, हरियो सागपात तथा फलफूल बढी खानुपर्छ, चिल्लो एवं गुलियो पदार्थ कम खानुपर्छ, नुनिलो तथा जंकफुड कम खानुपर्छ, चिसो पेयपदार्थबाट टाढिनुपर्छ। एकै ठाउँमा अर्थात् बसेरै काम गर्ने बानीलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ। जीवनशैली गतिमान, चलायमान बनाउनुपर्छ।
पार्टनरले एकअर्काको वजन घटाउन यथाशक्य सहयोग गर्नुपर्छ। उदाहरणका लागि, भातको सट्टा रोटी वा च्याँख्ला खान दिनुपर्छ, सँगै व्यायाम गरी सघाउने, मर्निङ वाक वा जगिङ जान प्रोत्साहित गर्नुपर्छ। तौल घट्न थालेपछि झन् उत्साहित गर्नुपर्छ। साथीको अधिक तौलको कारणले यौनिक क्रियाकलापमा कमी ल्याउनु हुँदैन।
बाध्यतावश कुनै औषधि सेवनले यौनेच्छा कम गराएको वा गराउन सक्ने भए सम्बन्धित चिकित्सकसँग परामर्श गरी वैकल्पिक औषधि खान थाल्नुपर्छ। यौन क्रियाकलापका क्रममा प्राक्क्रीडा, यौन छेडखानी तथा स्पर्शले यौन सन्तुष्टि पाउन सघाउँछ।
पोषण शिक्षा, व्यवहारमा परिवर्तन, खाना नियन्त्रण तथा शारीरिक अभ्यासबारे जानकारी लिनुपर्छ। मोटोपन भएकै व्यक्तिमा पनि रक्तअल्पता र कतिपय भिटामिनको कमी हुन सक्छ। लिफ्टको सट्टा भ¥याङ चढ्ने, मुटुको चाल २५ प्रतिशतले बढ्ने गरी छिटो–छिटो हिँड्ने, नाच्ने, घरको सरसरफाइ अनि लुगा धुने, करेसाबारीको काम गर्ने, साइकल चढ्ने गर्नुपर्छ। कोलेस्टेरोल कम गर्न र सुगर नियन्त्रणमा ल्याउन कम्तीमा एक घण्टाजति व्यायाम गर्नुपर्छ।
सुस्त गतिको मर्निङ वाक अनि त्यसलगत्तै अधिक चिल्लोयुक्त खानेकुरासहितको चियापानले पनि फाइदा गर्दैन। युरोपलगायत विकसित देशमा जहिले पनि जुनसुकै परिकार पस्कनुअघि सलाद तथा सागपात दिइन्छ। त्यस्तै, खानामा गेडागुडी, सागपात, फलफूललाई पनि उत्तिकै खाइन्छ।
तारिएका, भुटेका खाना कम, फलफूल र सागपात बढी खानुपर्छ। टुसाएको तथा रेशादार खानामा बल गर्नुपर्छ। व्रत बस्ने तथा डाइटिङ गर्ने बानीले उल्टो असर हुन सक्छ। लामो अन्तरालमा खाने बानीभन्दा पटक–पटक तर थोरै–थोरै खाइराख्ने बानी राम्रो हुन्छ। हतारिएर होइन, बिस्तारै स्वाद लिई खाने बानी बसाल्नुपर्छ।
बेला–बेलामा रक्तसञ्चार तथा मुटुको धड्कनको जाँचका साथै रगतमा कोलेस्टेरोल, चिनीको मात्रा जाँच गराउनुपर्छ। आवश्यक परेमा ईसीजी त्यसपछि समस्या हेरेर इकोकार्डियोग्राफी, हल्टर, ट्रेड मिल टेस्ट एवं एम्बुलेटरी ब्लड प्रेसरको जाँचको गराउनुपर्छ। शरीरको उचाइअनुसार तौल नियन्त्रणमा राख्नुपर्छ। शारीरिक रूपले पूर्ण सक्रिय जीवनयापन गर्नुपर्छ।